မိုးစက်ပွင့်: ကျောင်းတော်ရာ၊ ရွှေစက်တော် (၂)
Posted by Me at 18:15
ကိုယ်ကအလုပ်နဲ့ သွားရတာများတော့ပွဲတော်ချိန်မဟုတ်တာများတယ်။ အဲလိုအချိန်တွေမှာဆုိုရင်ချောင်းရေကအရမ်း
တခါတခါကမ်းစပ်မှာစိုက်ထားတဲ့ကုလားပဲပင်တွေရှိတဲ့အချိန်ဆုိုဘာပြောကောင်းမလဲကုလားပဲညွန့် သုပ်တုို့ ကြော်ချက်တုို့ ဟင်းချိုတို့ ကုိုအညာရုတ်သီးထောင်းစပ်စပ်နဲ့ တွဲစားရတာဆွေမျိုးမေ့ချင်စရာ။
မိုးစက်ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်လုိုက်လည်ရတာနော်။း)
လသာည 12 March 2013 at 16:21
မြသွေးနီ 15 March 2013 at 14:58
ကိုယ်တိုင် ခရီးကို ရောက်သွားလိုက်သလိုပါပဲ..
ပါးလျကုန်ပြီး အပျော်အပါးတွေများလာတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူးရယ်...
Anonymous 26 April 2013 at 16:14
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က တခေါက်ရောက်ဖူးတယ်၊ တံတားကြီးမရှိသေးလို. ဧရာဝတီမြစ်ကို Z Craft နဲ.ကူးရတာ ၊ မြစ်ထဲကသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ဘဲကလေးတွေအများကြီးဘဲနော်လို. ပြောတော့ မေမေက အဲဒါ ဘဲမဟုတ်ဘူး ရွှေဟင်္သာတဲ့ ၊
ရွှေစက်တော်မှာ မနက်စောစောတဲကျောင်းလေးကိုလာရောင်းတဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ.ပဲပြုတ်ကို တသက်မမေ့ဘူး၊ နမ်မဒါ (မန်းချောင်း) မြစ်ထဲကရတဲ့ကျောက်စိမ်းလေးလဲ သိမ်းထားသေးတယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ နောက်တခေါက်တော့ရောက်အောင်ကြိုးစာအုံမယ်
nini lwin 8 November 2013 at 11:11
speaktomeenglish dotcom 24 December 2014 at 05:12
If you’re just starting to learn English, then check this FREE site